IMF iyo Bankiga aduunka oo sheegay in Soomaaliya ay u qalanto dayn cafis - Jowhar Somali news Leader
Home News IMF iyo Bankiga aduunka oo sheegay in Soomaaliya ay u qalanto dayn...
IMF iyo Bankiga aduunka oo sheegay in Soomaaliya ay u qalanto dayn cafis
Guddiyada maamula hay’adaha ugu waaweyn maaliyadda dunida ayaa waxa ay ku ammaaneen Soomaaliya shaqada laga qabtay isbeddello dhinaca dhaqaalaha iyo maamulka hay’adaha maaliyadda ah iyadoo duruufaha Soomaaliya ay yihiin kuwo adag.
Labada hay’adood ee IMF iyo Bankiga Adduunka waxay ansixiyeen inay aqbaleen in Soomaaliya daymaha laga khafiifiyo.
IMF iyo Bankiga Adduunka waxay labaduba sheegeen inay tallaabadani muhiim u tahay in Soomaaliya laga saamaxo inta badan daynta lagu leeyahay oo ah $5.3 bilyan oo doollar.
Agaasimaha hay’adda IMF Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in oggolaansaha ay bixisay IMF uu yahay mid taariikhi ah.
“IMF waxa ay si cad u aqoonsanaysaa isbeddellada dhinaca dhaqaalaha ee ay Soomaaliya samaysay muddadii ay kormeerka dhaqaalaha ay ku hayeen shaqalaaha IMF.”ayay tiri Kiristina.
Sidoo kale haweeneydan ayaa waxa ay sheegtay inay muhiimaddda kowaad u tahay IMF in Soomaaliya ay marin u hesho tasiilaadka dhaqaale ee ay ku samayn karto kobac dhaqaale, iyo faqriga oo hoos loo dhigo.
“Geedisocodka lagu dhammaystirayo si ay Soomaaliya u hesho dayn-cafiska waddamada faqriga ah ee daymaha culus lagu leeyahay, in hawsha maaliyadeed ee Soomaaliya ee hadda ay kormeerka ku hayaan IMF looga soo baxo si lagu qanacsan yahay, iyo in dawladda Soomaaliya ay dawladaha iyo hay’adaha daymaha ku leh ay daymahooda siiyaan ama ay kula heshiiyaan istiraatijiyo looga nadiifiyo.”ayuu sii raaciyay Madaxa Bangiga Adduunka.
David Malpass ayaa sheegay in Bankiga Adduunka uu kula talinayo hay’adda horumarinta caalamiga ah ee hoos timaadda IMF ee IDA inay iyadu ka cafiso daymaha lagu leeyahay Soomaaliya dhammaadka bishan Febraayo. Intaasi waxaa dheer ayuu yiri in Soomaaliya looga baahan yahay in waajibaadyada saaran dhinacooda ay kasoo baxaan si ay u gaaraan heer dhammaystiran oo la gaaro go’aan kama dambays ah bisha Maarso ee sannadkan.
Waxa uu sheegay in marka ay Soomaaliya gaadho heerka dhammaystirka ah inay xaq u yeelan doonto dayn-cafin aan shuruudi ku xirnayn marka loo eego barnaamijka waddamada faqriga ah ee lagu leeeyahay daymaha culus; iyo weliba barnaamijyada daymaha culus ee u dhigma kuwaas ee ay ku wada jiraan hay’adaha Bankiga Adduunka,
Bankiga Horumarinta Afrika (AfDF), iyo taageerada IMF. Waxa uu intaasi ku daray in waddama la isku yiraahdo Paris Club laga filayo inay Soomaaliya siiyaan taageero ka sokow dayn-cafinta.